Baaq ka soo baxay Al-Ictisaam
22 Feb 22, 2013 - 6:35:36 AM
Jameecada Wadaadada Al-Ictisaam ayaa Baaq soo saarey maanta 21 February,2013 waxana uu u ku bilowdey sidatan:.
1.Waxaan kacodsanaynaa Dhammaan Culimada iyo Ducaadda Soomaaliyeed inay Joogteeyaan siina laban laabaan wacyi-galinta iyo cadaynta marin habowga
Kooxda alshabaab , iyadoo la adeegsanayo nadwooyin ,Muxaadarooyin iyo Khudbooyinka Jimcaha , islamarkaasna dal iyo dibad laysku kashashado sidii looga hortagi lahaa dabar goynta ay kooxda shabaab ku hayso madhaafaanka Soomaaliyeed , kooxdaas oo ah Cadowga dadka ,diinta iyo dalka .
2.Waxan kaloo kacodsanaynaa imaamyada Soomaaliyeed dal iyo dibadba inay bilaabaan Qunuud lagu habaarayo Kooxdaan dhunsan ee alshabaab , looguna ducaynayo muslimiinta in ilaahay shartiida kadul qaado , intii ay galaafteena ilaahay unaxariisto , arintaan waa arin diinta boos kuleh
oo nabigu (SCW) ayaa horay usameeyay kadib markii lalaayay Qurraa dadka
Quraanka barayay ,sidoo kalana uducaynayay Muslimiinta lacadaadinayay .
3.Waxaan ugu yeeraynaa Dhammaan ummada Soomaaliyeed inay sameeyaan isu soo baxyo waa wayn oo looga hadlayo sidii loo xallin Mushkilada wayn ee kooxda Al-Shabaab kuhayso Shacabka Soomaaliyeed .
kacodsanaynaa shacabka Soomaaliyeed meelay Joogaanba , inay usoo gudbiyaan laamaha Amniga cidkasta oo ay ku ogaadaan inay ku lug kuleedhay dilkii shiikha ama khatar ku tahay nabad galyada ummadda .
5.Ugu danbayntii waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed inay
si buuxda uga qayb qaataan ololaha looga hartagayo xasuuqa iyo dabar goynta kooxda alshabaab kuhayso dadkeena , qofwalbana waxaa laga doonayaa inuu ololahaas kaga qay galao Cilmigiisa ,Caqligiisa , Khaibradiisa Xoogiisa ,Xoolihiisa iyo Sumcadiisa .
Halkan ka dhageyso Codka Shiikh Axmed Cabdisamad ee baaqa More Articles